Wax sooraarka xabagta & Warshadaynta | Saint Paul Historical
Wax sooraarka xabagta & Warshadaynta
3M CASRIYAYNTA WAX SOO SAARKA XABAGTA
Xabagta Sheekada Duubka xabagta
Duubabka xabagta ee qiyaasta iyo xabagaynta ee cadaadiska xasaasiga ku ah waxaa lagu dahaadhaa xabag lagu dhejiyo xejiye debcsan. Shirkadu waxay u adeegsatay khibradeeda dahaadhka iyo xejinta si loo sameeyo alaabtii u horaysay ee 3M taas oo iska beddeshay warqadda baaleeska iyo baaleesyada.
Xabagta lagu dhejiyo meesha aan la rinjiyaynayn
Xabagta lagu dhejiyo meesha aan la rinjiyaynayn waxaa la sameeyay 1925 si loo buuxiyo baahida warashadaha baabuurta si looga caawiyo rinjiyaynta buuxda ee gaadhiga. Alaabta waxaa markii u horaysay la suuq geeyay 1927 hoosta magaca summada “Stoch.”
Xabgta korontada markii u horaysay waxaa la sameeyay 1929. Xabgtan waxay keentay horumarinta iyo bilaabida noocya kala duwan oo xabagta korontada ah iyo alaabta farsamada.
Xabagta duubka khafiifka ah
Xabagta duubka khafiifka ah, oo dib loogu magac bixiyay xabagta selefoonka 1948, waxaa loo sameeyay sidii xabagta wax lagu xidho ee biyaha celisa wixii ku xidhista selefoonka ah. Markuu ugu horaysay waxaa la suuq geeyay 1930, degdeg waxay caan uga noqotay ganacsiyo badan, xafiisyo, iyo isticmaalka guriga, gaar ahaan ka dib marka shayga xabagta la dhex geliyo la sameeyay 1937.
Cajalada magnatka leh
Cajaladii u horeeyay ee duubista codka waxaa la sameeyay 1947. Jacalada magnatka leh waxaa loo sameeyay walxo magnat leh oo ayron ogsaydh oo lagu isticmaalay xejiye caaga ah oo debecsan.
Duubka fuudhka ee qiyaasta
Duubabka fuudhka ee asitayt ayaa la sameeyay oo la isticmaalay muddadii Dagaalkii Adduunka ee II. Alaabtan waxay keentay hourmarinta duubab dheer xoog leh oo adkaysi leh
Dhowr guri ayaa loo dhisay si loo dhigo alaabta la sameeyo ee xabagta ah iyo xarumaha cilmi baadhida. Shaqadii u horaysay ee xagabta duubka ah waxay ka bilaabantay Dhismaha 14 ka dib markii la dhisay 1929. Dhismaha 20, ee la dhisay 1937 iyo 1940, waxay ka koobnaayeen hawlaha xabagta duubka ah , sida ay ahaayeen dabaqyada sare ee Dhismaha 14, ee lagu daray 1945. Dhismayaasha 22, 23, iyo 14 2 waxay loogu daray cilmi baadhida xabagta duubka ah iyo warshadaynta intii u dhexaysan 1941 iyo 1951.
Liidadka ilayska soo celiya
3M wax soo saarka ilayska soo celiya ayaa la sameeyay si looga dhigo wadada iyo jid waynayaasha iyo goobta wadada dhinaceeda ah calaamada la arki karo habeenkii. “Scotchlite” waxaa laga sameeyaa kuul dahaadhleh oo leh xejis debecsan, oo meel kula haysa xabagta. Waxaa lo sameeyay 1938 wadooyinka maxaliga ah oo si degdeg ah waxay ugu faaftay isticmaalada alaabta ee ciidanka iyo isticmaalka madaniga ah.
Riiboonada iyo Qurxinta
Cilmi baadhida xabagta duubka ah waxay keentay “Mistlon,” oo laga sameeyay liifka maryaha arda fiishalka ah, taas oo la sameeyay 1937. Waxay ahayd beddel xoog badan oo warqadda ah. Cilmi baadhid dheer waxay keentay in riiboonada iyo agabka qurxinta lagu iibiyo hoosta magaca “Lacelon” (1948), “Sasheen” (1950), iyo “Decorette” (1951).
“Scocth” waxay u qaadatay 3M sidii magaca summada noocyadeeda badan ee xabagta ah. Xidhmada tartanka waxaa la bilaabay 1945 dhammaadkii dagaalkii labbaad ee adduunka.
Dhismaha 24 (bidix), Dhismaha 23 (midig), ca. 1955 ~ Source: Minnesota Historical Society
Duubka fuudhka ee qiyaasta ~ Source: Minnesota Historical Society
Meet Scottie: Sifada Scottie Mc Tape waxaa la abuuray 1946. ~ Source: Minnesota Historical Society
Scottie McTape: Sifada Scottie Mc Tape waxaa la abuuray 1946. ~ Source: Minnesota Historical Society
Marjorie Pearson, Summit Envirosolutions, Inc., “Wax sooraarka xabagta & Warshadaynta
,” Saint Paul Historical, accessed February 19, 2019, https://so.saintpaulhistorical.org/items/show/385.